Kenyan President Uhuru Kenyatta, left, and his South African counterpart Cyril Ramaphosa address the media after their meeting in Pretoria, South Africa, Tuesday Nov. 23, 2021. Kenyatta is in South Africa on a state visit to discuss political and economic issues. (AP Photo/Themba Hadebe)
Kenyan President, Uhuru Kenyatta, left, and his South Africa counterpart Cyril Ramaphosa, right, attend a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa, Tuesday Nov. 23, 2021. Kenyatta is in South Africa on a state visit to discuss political and economic issues. (AP Photo/Themba Hadebe)
Kenyan President Uhuru Kenyatta, center, reviews the honor guard during his welcoming ceremony in Pretoria, South Africa, Tuesday Nov. 23, 2021. Kenyatta is in South Africa on a state visit to discuss political and economic issues. (AP Photo/Themba Hadebe)
Kenyan President, Uhuru Kenyatta, foreground, and his South African counterpart, Cyril Ramaphosa, stand to attention as they listen to the national anthems during a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa, Tuesday Nov. 23, 2021. Kenyatta is in South Africa on a state visit to discuss political and economic issues. (AP Photo/Themba Hadebe)
Kenyan President Uhuru Kenyatta arrives for his welcoming ceremony in Pretoria, South Africa, Tuesday Nov. 23, 2021. Kenyatta is in South Africa on a state visit to discuss political and economic issues. (AP Photo/Themba Hadebe)
Kenyan President Uhuru Kenyatta, left, and his South Africa counterpart Cyril Ramaphosa talk during a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa, Tuesday Nov. 23, 2021. Kenyatta is in South Africa on a state visit to discuss political and economic issues. (AP Photo/Themba Hadebe)
Kenyan President, Uhuru Kenyatta, left, talks to his South African counterpart Cyril Ramaphosa during a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa, Tuesday Nov. 23, 2021. Kenyatta is in South Africa on a state visit to discuss political and economic issues. (AP Photo/Themba Hadebe)
Kenyan President, Uhuru Kenyatta, left, and his South Africa counterpart Cyril Ramaphosa attend a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa, Tuesday Nov. 23, 2021. Kenyatta is in South Africa on a state visit to discuss political and economic issues. (AP Photo/Themba Hadebe)
Kenyan President, Uhuru Kenyatta, left, walks by his South African counterpart Cyril Ramaphosa during a welcoming ceremony in Pretoria, South Africa, Tuesday Nov. 23, 2021. Kenyatta is in South Africa on a state visit to discuss political and economic issues. (AP Photo/Themba Hadebe)
Kenyan President Uhuru Kenyatta addresses the media after meeting with his South African counterpart, Cyril Ramaphosa, in Pretoria, South Africa, Tuesday Nov. 23, 2021 . Kenyatta is in South Africa on a state visit to discuss political and economic issues. (AP Photo/Themba Hadebe)